शीर्ष एड्सेन्स शीर्षक: एजेक्स, फ्ल्यास, वर्डप्रेस र फायरफक्स Martech Zone
शीर्ष एड्सेन्स शीर्षक: एजेक्स, फ्ल्यास, वर्डप्रेस र फायरफक्स
बुधबार, डिसेम्बर 27, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
केही हप्ता पहिले, म एकीकृत गुगल एनालाइटिक्सको साथ एड्सेन्स (टिप #)) परिणामहरू हेरेर म पहिले नै मोहित छु। गुगल एनालिटिक्सको एक उल्टो गोल पथ छ जहाँ तपाईले पथ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ जुन विज्ञापन क्लिक गर्नु अघि पर्यटकहरूले प्रयोग गरेका थिए। यस जानकारीको साथ सशस्त्र, एक दुई फरक दृष्टिकोण लिन सक्छ:
म यी शीर्षकहरू लेख्न जारी राख्छु भने म अझ धेरै पैसा कमाउन सक्छु।
त्यहाँ यी क्षेत्रहरूमा सामग्रीको लागि माग छ - यति धेरै व्यक्तिहरू यसलाई प्राप्त गर्न विज्ञापनमा क्लिक गर्न इच्छुक छन्!
मेरो बेल्ट अन्तर्गत दुई हप्ताको विश्लेषणको साथ, म मेरो ब्लगको सामग्रीमा दिशा परिवर्तन गर्ने छैन बढि विज्ञापन राजस्व प्राप्त गर्न। तर ... यस्तो देखिन्छ कि मानिसहरू मेरो ब्लग खोज्दैछन् र यसलाई विज्ञापन लिंक मार्फत छोड्दैछन् जब उनीहरूले खोजी गरिरहेका विषयहरूका लागि आवश्यक जानकारी फेला परेनन्। यहाँ उल्टो लक्ष्य पथ संग तथ्या at्कहरु मा एक राम्रो लुक छ:
ती शीर्षकहरू? एजेक्स, फ्ल्यास, वर्डप्रेस र फायरफक्स। मेरो ब्लगमा 'हट' विषयवस्तु मध्ये एक हो 'वर्डप्रेस' ट्याग गरिएका शीर्षकहरूमा अरु हिट भन्दा बढी हिटहरू। म अहिले एक WordPress साइडबार विजेटमा काम गर्दै छु किनकि ती इष्ट छन् र मेरो ब्लगलाई थप पाठकहरूमा पर्दाफास गर्न सक्छ।
अज्याक्स, फ्ल्याश, र फायरफक्सका लागि ... मैले ती लिन चाहान्छु भनेर हेर्नु पर्छ। म अजाक्सको ठूलो प्रशंसक हुँ तर धेरै फ्ल्यास अनुभव छैन (मेरो साथी बिलमा धेरै छ)। र निस्सन्देह मलाई फायरफक्स मन पर्छ, यो एड-अन टेक्नोलोजी हो, र फायरबग! फायरबग हो को कुनै पनि वेब विकासकर्ताको लागि आवश्यक विकास उपकरण।
त्यसो भए ... माग पूरा गर्न ती शीर्षकहरूको बारेमा लेख्नुहोस् र तपाईं अधिक पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। एनालिटिक्स राम्रो छ!
गिफ्ट कार्ड अनलाइन किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्!
नोभेम्बर २०, २००। 13::2008 अपराह्न
मसँग फ्ल्यास वेबसाइट छ
म स्क्रिप्टको लागि खोजी गर्दैछु जसले फ्ल्यासमा गुगल एड्सेन्स देखाउँदछ।
म यो कसरी पाउन सक्छु?
नोभेम्बर २०, २००। 17::2008 अपराह्न